भानुभक्त आचार्य नेपालका राष्ट्रिय विभूतिसमेत हुन्
नेपाल भानुभक्त आचार्य नेपालका राष्ट्रिय विभूतिसमेत हुन्
२०७७ असार २९ गते | भानुभक्तको प्रशंसामा ‘नेपाली साहित्यका सर्वश्रेष्ठ पुरूष’ शीर्षकको निबन्ध लेखेका छन् । साहित्य लेखेर नेपालमा उनको जत्तिको प्रसिद्धि कमाउने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा एक होलान् । त्यसबाहेक भानुभक्तको जत्ति सम्मान कमाउने अर्को साहित्यकार नेपालमा छैनन् भन्दा हुन्छ ।
भानुभक्त आचार्य (वि.सं १८७१–१९२५) मुलतः अध्यात्म रामायणलाई नेपालीकरण गर्ने नेपाली आदिकविका रूपमा चिनिन्छन् । त्यसबाहेक उनका वधूशिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तरमाला सहित अन्य फुटकर रचनाहरु छन् ।
लेखोटको रूपमा थन्किएका भानुका रचनाहरुलाई नेपाली जनस्तरमा पुर्याउने काम मोतीले गरे । ‘कवि भानुभक्तको जीवनचरित्र’ लेखेर भानुको व्यक्तित्व र कृतित्व उजिल्याउने काम मोतीले नै गरेका हुन् ।
भानुभक्त आचार्य नेपालका राष्ट्रिय विभूतिसमेत हुन् । नेपालमा आजसम्म भानुभक्त र उनका जीवनी लेखकसमेत रहेका मोतीराम भट्ट गरी दुईजना नेपाली भाषाका साहित्यकार राष्ट्रिय विभूति घोषित भएका छन् । राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा भानु जति नै सम्मानित भएपनि मोतीको प्रसिद्धि भानुको जति छैन । भानुलाई भने मोतीले चम्काएको कुरा प्रमाणिक छ ।
भानुभक्तलाई नेपाली साहित्यका आदिकवि मानिएको हो । नेपालकै आदिकवि भनिएको पनि होइन नेपालीमा रामगाथालाई लोकप्रिय बनाउन, नेपाली समाजमा रामायण संस्कृतिको विकास गराउन र नेपालीहरूमा रामप्रति भक्तिभाव बढाउन सर्वाधिक योगदान भानुभक्तीय रामायणको रह्यो ।
मोतीरामले ‘कवि भानुभक्तको जीवनचरित्र’मा ‘भक्ति रसका सर्वोच्च नेपाली कवि’ भनी लेखेका छन् । अहिले पनि नेपाली गाउँघरमा भानुभक्तीय रामायणको श्रद्धापूर्वक पाठ गरिन्छ ।
आग्रही वा पुर्वाग्रही हेराइबाट कुनै व्यक्ति, वस्तु वा विषयलाई ठिक ढङ्गले ठम्याउन सकिँदैन । अति प्रशंसक वा निन्दक प्रवृत्तिले दृष्टिदोषको समस्या ल्याउन थाल्छ । भानुको नाम सुन्दै नाक खुम्च्याइ हाल्नु पर्दैन ।
राज्यको एक भाषिक नीतिले विगतमा नेपालका अन्य भाषाहरुलाई पाखा पारेकै हो । भानुभक्तको काव्यकलाका कारण अन्य भाषा–साहित्यको बिकासमा बाधा पुगेको हैन । भानुभक्तलाई नेपाली भाषाको साहित्यका आदिकवि मानिएको हो, नेपालकै आदिकवि भनिएको होइन ।
भानुभक्त नै नेपाली राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन् र उनले नेपालको भाषिक एकीकरण गरे भन्ने भनाइ पनि अतिरञ्जित छ । भानुभक्तले नेपालको भाषिक एकीकरण गरे भनेको के हो ? नेपालमा नेपाली भाषा र नेपाली भाषामा लेखिएको साहित्य मात्र छ त ?
देशमा प्रचलित एक सयभन्दा बढी भाषामध्ये एउटाको श्रीवृद्धिमा योगदान गरेकै कारण सिङ्गो नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भन्नु अतिशयोक्ति हो ।
भानुलाई चम्काउने मुख्य मोती रामायण थियो । रामायणले नै उनलाई चिनायो । चिनायो मात्र होइन प्रसिद्धिको शिखरमा पुर्यायो ।